गैँडाकाेट कांग्रेस सभापतिका प्रत्यासी खेम सापकाेटाले भने : भ्रम, अविश्वास र आक्षेपले दुःखी छु ! – उज्यालो खबर
गैँडाकाेट कांग्रेस सभापतिका प्रत्यासी खेम सापकाेटाले भने : भ्रम, अविश्वास र आक्षेपले दुःखी छु !
गैँडाकोट ।नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत गैँडाकोट नगरसभापतिमा खेमराज सापकोटाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ । सोमबार विहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले राजनीतिक निष्ठा र गैँडाकोटको भरोसा कायम राख्न आफुले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ । सापकोटाले अब आफ्नो कुनै प्यानल नहुने आफु स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको बताउनुभएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा आफ्ना बारेमा सिर्जना गरिएका भ्रम, अविश्वास, आक्षेप, अस्वस्थ राजनीतिक प्रचारबाजीले मलाई दुःखी एवं आश्चर्य तुल्याएको सापकोटाले बताउनुभएको छ । स्वार्थ प्रेरित, अस्थिर र ढुलमुले नीति र व्यवहारले संगठनलाई हित नगर्ने भन्दै नगरवासीको समृद्धिका लागि सचेत रहन समेत काँग्रेस कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।